၅၀၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ Mask လေးတွေသုံးပြီး Glow Skin လေးကို ပိုင်ဆိုင်ကြမယ် .... - Shop
၅၀၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ Mask လေးတွေသုံးပြီး Glow Skin လေးကို ပိုင်ဆိုင်ကြမယ် ….0589
ဂလိုးပြီး ကျန်းမာတဲ့အသားအရည် ပိုင်ဆိုင်မို့ Mask လေးတွေကပ်ပြီး အစွမ်းကုန်လှလိုက်ကြရအောင် ….
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အပြင်ထွက်သွားလာနေတော့ သဲလေးတို့အသားအရည်လေးဟာ နေလောင်ဒဏ်တွေ၊ ဖုန်မှုန့်တွေကြောင့် ပျက်စီးနေပြီပေါ့ … ပျက်စီးနေတဲ့အသားအရည်လေးမဖြစ်အောင် ပြန်လည် ဂရုစိုက်ပေးရင်တော့ ဂလိုးပြီး ကြည်တောက်နေတဲ့ အသားအရည်လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပေါ့ …
ကျန်းမာတဲ့အသားအရည်လေးကို ပိုင်ဆိုင်မို့အတွက် Mask လေးတွေကပ်ပြီး အစွမ်းကုန် လှလိုက်ကြရအောင် …
၅,၀၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်လေးနဲ့ အရည်အသွေးကောင်းပြီး Mask လေးတွေက သဲလေးတို့ကို ဘယ်လိုလှစေနိုင်လဲဆိုတာ ပြောပြပေးမယ်နော် …
Intensive shinning mask
ဒီ Mask ကတော့ သဲတို့ရဲ့အသားအရည်ကို နုဖတ်ပြီး ပန်းနုရောင်သန်းတဲ့ အသွင်ကို ရရှိစေနိုင်မှာပါ …..Korea နိုင်ငံမှာပွင့်တဲ့ Camellia ပန်းပွင့်မှရရှိသောအဆီအနှစ်များစွာဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အသားအရည်ကို နူးညံ့စိုပြည်လှပစေတယ်…တစ်ထုပ်တည်းနဲ့ အကုန်ပြည့်စုံနေပြီး ပန်းနုရောင်သန်းတဲ့အသားအရည်လေးကို ရရှိစေတာဆိုတော့ အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော် ….
Blooming essence ကိုမျက်နှာသစ်ပြီးတာနဲ့မျက်နှာပြင်အနှံ့လိမ်းလိုက်ပါ … essence ဖြစ်လို့Mask မသုံးရသေခင်တောင်အသားလေး စိုပြီးအိနေပါလိမ့်မယ် …
Intensive shinning mask ကိုessence လေးလိမ်းပြီးတာနဲ့ကပ်ပေးလိုက်ပါ … မျက်နှာလေးပန်းနုရောင်သန်းကာအသားရေစိုလာပါမယ်. …
Hydro eye cream ဆိုတော့mask ကပ်ပြီးတာနဲ့သူ့ကိုမျက်ဝန်းတစ်ဝိုက်အောက်မှအပေါ်သို့ပင့်တင်လိမ်းပေးပါ။မျက်ကွင်းညှိခြင်းကိုသက်သာစေပါတယ်.
Innisfree My Real Squeeze Mask – Green Tea X5sheet
Innisfree ဆိုတာ ကိုရီယားနိုင်ငံထုတ် အမှတ်တံဆိပ် တစ်ခုဖြစ်ပြီ သဲလေးတို့နဲ့ ရင်းနှီးနေတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် … ဒီ Mask လေးကတော့ ရေဓာတ်ကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပြီး ဓာတုပစ္စည်းလည်းမပါဝင်ဘူးဆိုတော့ အသားအရည်တိုင်းနဲ့ သင့်တော်တဲ့ Mask လေးပါနော် … ရက်အနည်းငယ်နဲ့ ကျန်းမာနုပျိုတဲ့ အသားအရည်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်နော် …တစ်ပတ်ကို ၂ ကြိမ် ဒါမှမဟုတ် ၃ ကြိမ်လောက်အသုံးပြုပြီးတာနဲ့ မျက်နှာလေးကိုကြည်လင်တောက်ပစေပြီး ဂလိုးစကင်းလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီပေါ့နော်…
ဒီ Mask လေးကတော့ အခုနောက်ပိုင်း Review တွေလည်း ကောင်းကောင်းရထားတဲ့ Mask တွေထဲက တစ်ခုပါပဲနော် …
Super Vegitok mask မှာ cleanser နဲ့ Sheet mask တွဲရက်၂မျိုးပါပြီး အသီးအနှံတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားလို့ sensitive skin ရှိတဲ့ သူတွေတောင် သုံးလို့ ရပါတယ်နော် …
အဆင့်(၁) အနေနဲ့ …. cleanserလေးနဲ့ မျက်နှာ သစ်ပါ (cleanserက တစ်ခါသုံးပါတယ်ဆိုပေမဲ့ 2ခါလောက် ရပါတယ် )
အဆင့်(၂) အနေနဲ့ … sheet mask ကို မိနစ် 20 လောက် ကပ်ပြီး ခွာချ လိုက် ရုံပါပဲ 😍😍
ပြီးရင်တော့ ရေဓာတ်ပြည့်ဝပြီး ကျန်းမာတဲ့ အသားအရည်လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီနော် …
🍀အစိမ်းရောင်လေးက အစိမ်းရောင် အသီးအနှံ ၁၀မျိုးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး Moisture ပေးပြီး အသားကြည်စေပါတယ်
🍅အနီလေးမှာတော့ အနီရောင် အသီးအနှံ ၁၀မျိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး whitening effectကို ပေးပြီး glow စေတယ်နော်
🍇 ခရမ်းရောင်လေးကတော့ ခရမ်းရောင်အသီး ၁၀မျိုး နဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး Anti aging တွက် အသားရေကို တင်းရင်း စေပြီး သူလဲ glowပါတယ်နော် ..
ဒီ Mask လေးအထုပ်လေးမှာတော့ Essence ရယ် Mask အထုပ်လေးရယ်နဲ့ Eye Cream ဆိုပြီး အဆင့်သုံးဆင့် ပါဝင်တဲ့အထုပ်လေးဆိုတော့ အသားအရည်ထိန်းသိမ်းမို့ တစ်ထုပ်တည်းနဲ့ ပြည့်စုံတာပေါ့ … ရေဓာတ်ကို အပြည့်အဝပေးပြီး ပုလဲနက်ပါဝင်မှုကြောင့် အသားအရည်ကို ညီမျှပြီး တောက်ပစေပါတယ်နော် … ခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရည်များ၊ ညစ်နွမ်းနေတဲ့အသားအရည် အတွက် အကောင်းဆုံး Mask လေးပဲဖြစ်ပါတယ် …
အဆင့် ၁ အနေနဲ့တော့ Marine Brightening Essence ကို အရင်မျက်နှာအနှံ့ အသုံးပြုပေးပါ
အဆင့် ၂ အနေနဲ့တော့ မိနစ် ၂၀ လောက်ထားပြီးနောက် Mask လေးကို အသားအရည်ထဲ စိမ့်ဝင်အောင်လိမ်းပေးပါ
အဆင့် ၃ အနေနဲ့တော့ Eye Cream လေးကို မျက်စိတစ်ဝိုက် သို့ ညင်ညင်သာသာ ပွတ်ပေးပါ
အခုတလော အမေးများပြီး အသုံးများနေတဲ့ BANOBAGI Mask လေးတွေကတော့ jelly typeဖြစ်ပြီး အရေးကြောင်းများကို သက်သာစေကာ အသားအရည်ကို ဖြူဝင်းပစေပါတယ်‍ … တစ်မျိုးချင်းစီမှာလည်းမတူညီတဲ့ effectလေးတွေပါဝင်ပြီး ဂျယ်ဂျူကျွန်းကထွက်တဲ့ သဘာဝ အသီးအနှံလေးတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် …
Vita Genic jelly Mask (whitening)
အသားအရည် ဖြူဝင်းပစေပြီး တင်းရင်းနုပျိုစေတဲ့အသွင်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ် … အမဲစက်လေးများကို
လျော့ပါးစေကာGlow skin လေးရရှိစေပါတယ် …
Vita Genic jelly Mask(relaxing)
အသားအရည်ကို နီမြန်းနေတာတွေကိုသက်သာစေပြီး ဝက်ခြံဖု အဆီဖုများနဲ့ sensitive skin များအသုံးပြုလို့ရ၍ မညီညာသောအသားရေကို ပိုမိုချောမွေ့ကြည်လင်စေပါတယ် …
Vita Genic jelly Mask (hydrating)
မျက်နှာမှာနေ့စဉ်လိုအပ်လျှက်ရှိတဲ့ ရေဓာတ်ကိုအပြည့်အဝဖြည့်ပေးပြီ းခြောက်သွေ့ညိုမွဲနေတဲ့ အသားရေကိုကြည်လင်ချောမွေ့စေပါတယ် …
Vita Genic jelly Mask (lifting)
အသက် 20 ပါတ်ဝန်းကျင်တွေ တစ်ပတ် နှစ်ခါလောက် အသုံးပြုပေးရင် ပိုအဆင်ပြေပီး အသားအရည်ကို လျော့တွဲနေတာတွေကိုတင်းရင်းစေပြီးအရေးကြောင်းများကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ် …
Mask အမျိုးအစားများစွာကို ဒီလင့်ခ်တွင် > >> http://bit.ly/2uxo32E < < < ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် ….
Previous Articleချွေးပေါက်ထဲက အညစ်အကြေးတွေကို အစွမ်းကုန်သန့်စင်ပေးမယ့် Aztec Indian Healing ClayNext Articleနက်မှောင်သန်စွမ်းတဲ့ ဆံကေသာအတွက် လျှို့ဝှက်ချက်က …